Kutheni Khetha Us? - Shandong Chenan Machinery Co., Ltd
1.Professional R & iqela D: iindidi zakho iinjineli zobungcali, onokukwazi ukwenza nokuvelisa 5 axis umatshini cnc, RV iziko iiphaneli edityanisiweyo processing, iziko sokubumbela cnc enkulu kunye nezinye izixhobo isiko isiphelo ophezulu.
2.Powerful machining ubunakho: sinento USA HASS nkqo Machining Centre, USA HASS Horizontal Machining Centre, Taiwan AWEA Gantry Five-Ubuso Machining Centre, iintlobo umatshini ekruqulayo kunye umshini wokugaya. iminyaka machining namava ukuqinisekisa umgangatho kunye ngqo zonke iindawo mechanical nanceba ngaphezulu kwama-20;
izixhobo uvavanyo 3.Advanced: Siya yokungenisa UK RENISHAW brand laser interferometer / USA inkokheli brand isilungelelanisi umlinganiselo UK RENISHAW inkqubo Umatshini / brand ballbar, ezabo Laser autocollimator / edge Optical somfumani Dial gauge, Dial Isalathisi / square ibhokisi / Marble ibhokisi isikwere kwaye wenze elana itekisi ukumelana emhlabeni / uvavanyo test / uxinzelelo, ukuqinisekisa zonke umatshini kunye nokusebenza ogqibeleleyo phambi kokuba unikezelo.
iiyure 4.24 online emva-nkonzo kunye Yomngcelele iqela emva-nkonzo, ukuba uphendule umbuzo yoMthengi ngexesha.